भैसेपाटी भेट्न पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई वामदेवले यसो भनेर फर्काए ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भैसेपाटी भेट्न पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई वामदेवले यसो भनेर फर्काए !
भैसेपाटी भेट्न पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई वामदेवले यसो भनेर फर्काए !
admin July 28, 2020 July 28, 2020 समाचार	0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेर भैसेपाटीवाट भर्खर फर्किएका छन् । उनी पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई लिएर वामदेवलाई भेट्न मंगलवार साँझ भैसेपाटी पुगेका थिए । उनीहरुबीच करिब दुई घण्टा कुराकानी भएको बताइएको छ । पार्टीमा संकटमा परेका प्रधानमन्त्री ओली उनको समर्थन खोज्दै गौतमकै निवास पुगेको बताइएको छ । स्थायी समितिमा अल्पमतमा परे
यसरी अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको बैठक छल्दै आएका छन् । स्थायी समिति बैठकमै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेपछि उनले बैठक छल्दै आएका हुन् । सांझ ७ वजे गौतम निवास पुगेका ओली दुई घण्टा बसेर फर्किएका हुन् । नेकपाको मंगलबारका लागि तय भएको बैठक पनि ओलीले आधा घण्टाअघि एकतर्फी रुपमा स्थगित गरेका थिए।
त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय नेताहरु बालुवाटारमै गई बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरुको बैठक प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले एक तर्फीरुपमा बैठक स्थगित गर्न नपाउने भन्दै वैठकलाई निरन्तरता दिएका थिए । आफूले बैठक स्थगित गर्दागर्दै बालुवाटारमै बहुमत सदस्यको बैठक बसेपछि दबाबमा परेका ओली गौतमको साथ खोज्न उनकै निवास पुगेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
आज नै उपाध्यक्ष बामेदव गौतमले सहमतिका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए। जसमा ओलीलाई अहिलेको प्रतिनिधिसभाको पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्षबाट नहटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। तर उनले पार्टी सञ्चालनतर्फ कार्यकारी प्रचण्डलाई एकता महाधिवेसनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षसहितको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेका छन्।
उपाध्यक्ष गौतमको सो प्रस्तावालाई ओली पक्षले भने सकारात्मक रुपमा लिएको बुझिएको छ । वामदेवसंग गोप्य वार्ता गएका ओलीसंग पार्टी एकता टुक्रिन दिन नहुने विषयमा छलफल भएको छ । पार्टीमा देखिएको विवादका कारण कार्यकर्तामा नकारात्मक असर परेको भन्दै एकतालाई नै बलियो बनाएर लैजानुपर्ने सुझाव गौतमले ओलीलाई दिएको बुझिएको छ ।
नेता गौतम तत्कालिन माओवादी र एमालेबीचको पार्टी एकिकरणका सुत्राधार हुन् । उनी पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षका नेता हुन् । भैसेपाटीमै भेट्न आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन उनले सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ ।
के बिष्णु माझी साँच्चिकै गुमनाम भएर बाँच्न चहान्छिन् त? खुल्यो यस्तो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्)
एनटिसीले ल्यायो नयाँ सेवा! ग्राहकलाइ सजिलो कि उस्तै!
भर्खरै सुर्खेतबाट आयो सबैलाई चकित पार्ने घटनाको खबर
अघिल्लो दिन छोरीसंग फोनमा ‘दशैंमा आउँछु’ भनेका गुरूङ कस्मिरमा अस्ताए
दुई युवतीको शानदार डान्स, रातारात भाइरल (भिडियो)
आफ्नै जीवनमा आधारित यति मिठो गीत रेकर्ड गराए अर्जुनले ! ( भिडियो हेर्नुहोस् )
४० बर्षिया महिलाको ब्यथा- बिहेअघि कुमारी नै थिए र अहिले पनि कुमारी नै छु!
अन्तत: पत्ता लाग्यो घर, कृष्णबहादुर बोहोराकी छोरी मिडियामा (भिडियो सहित)
निशाको कोठामा पुग्दा चल्यो रुवाबासी, कोठैभरि श्रीमानको तस्बिर भगवान मानेर पुजा गर्थिन, प्रमाणसहित हेर्नुस यस्तो द’र्दनाक अवस्था(भिडियो)
कल्पनासँग स म्बन्ध रा ख्दै आएकाले १६ बर्षिया छोरीलालाई समेत आँ खा लगाएपछि गयो ज्यान
महिलाले मैथु:न गरेको राम्रो कि नराम्रो! यस्तो छ कुरो! अवस्य हेर्नुस्
श्रीमान बिदेशमा श्रीमती अ’र्कैसंग कोठामा ना’ङ्गै र’ङ्गे हा’त प्र’काउ! ( पुरा भिडियो हेर्नुहोस् )
सकियो पर्खाईकाे घडि, अन्ततः भोलिबाटै कोरोना विरुद्धको औषधी बजारमा ल्याउँदै रूस!
०७७ साउन २७ गते मंगलबार ई.सं. २०२० अगष्ट ११ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
कहालीलाग्दो बन्यो ब्राजिल, अस्पतालका कोठादेखि सडक पेटीसम्मै शव